အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန် - Axnew Display ကိုနည်းပညာ Co. , Ltd မှ။
1. AXNEW display ကိုတင်းကြပ်စွာစက်ရုံထုတ်လုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အတူလိုက်နာမည်ဖြစ်သည်။ အီး FCC သည် ROHS အရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အထိန်းချုပ်မှုအပေါ်လုပ်ဆောင်နေ။
2. နေ့စဉ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ရောင်းချမှုမပြုမီ 48 ကျော်နာရီကိုစမ်းသပ်မည်ဖြစ်သည်။
တိုင်းကုန်ပစ္စည်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ပို့မှတ်တမ်းများတှငျမှတျတမျးတငျထားသမည်ဖြစ်ကြောင်း 3. ကုန်ပစ္စည်းများပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့လိုအပျပါကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အလွယ်တကူပါလိမ့်မယ်။
4. AXNEW display ကိုအပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့နှင့်မော်နီတာများအတွက်အသစ်နှင့်နဂို LCD ပြားအပါအဝင်အရည်အသွေးကောင်းအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ, မွေးစား, အရည်အသွေး warranty.our R & D အဖွဲ့တခုကိုတစ်စုံလင်သောတန်းတည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူအချို့သောရှည်လျားအသုံးပြုမှုဘဝဖွံ့ဖြိုး ထိန်းချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ကြမ်းတမ်း enviroments မှာအလုပ်လုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LCD ကိုထောကျပံ့ဖို့။ ထိန်းချုပ်မှုပျဉ်ပြားများအတွက်အနိမ့်ပျက်ကွက်မှုနှုန်းနှင့်အတူကျယ်ပြန့်သောအပူချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်ရှိပါတယ်။
5. ထုတ်ကုန်မကောင်းတဲ့အခြေအနေများရှိကြ၏လျှင်, ငါတို့သည် 48 နာရီအတွင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အတူကူးယူလိမ့်မယ်။
သူတို့သည်သင်၏ destination သို့ရောက်ရှိပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိန့် 6.For ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်အာမခံအသုံးအနှုန်းများသို့သူတို့ကိုငါထား၏။ ထိုအခါသူတို့ကအာမခံအတွင်း DOA နှင့် RMA န်ဆောင်မှုများပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့သဘောတူညီခဲ့လျှင်ပုံမှန်အားဖြင့်စံအမိန့်များအတွက် 1 နှစ်အာမခံကျနော်တို့2နှစ်အာမခံဖို့တိုးချဲ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။3နှစ်အာမခံအချို့သောအထူးစီမံကိန်းများအတွက်အတူတကွဆွေးနွေးကြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။